Endritsoratra 4 ampiasaina indrindra | Famoronana an-tserasera
Endritsoratra 4 be mpampiasa indrindra
Beatriz Hernani | | dia midika hoe
Imbetsaka izy io dia tsy omena ny lanja sahaza azy, fa ny safidy ny endri-tsoratra rehefa manatanteraka tetikasa dia iray amin'ireo lafin-javatra lehibe indrindra.
Raha ny fijeriko azy dia heveriko fa sombin-javatra manan-danja izay misy akony betsaka amin'ny famolavolana, ohatra, hanome azy endrika kanto kokoa, mavitrika kokoa, mahafinaritra kokoa, sns.
Izany no antony nieritreretako ny hanao lisitra kely endritsoratra efatra ampiasain'ny mpamolavola ary, ho fanampin'izay, matetika koa aho mampiasa, antenaiko fa hanampy anao izany.
HELVETIVE: Tamin'ny taona voalohany nianarako dia nilaza tamiko ny iray amin'ireo mpampianatra tsara indrindra nananako ary nisy mpamorona tsara: "Rehefa misy fisalasalana, Helvetica" Ary nanomboka teo dia tsy isalasalako izany. Izy io dia noforonina tamin'ny 1957 tamin'ny Max Miedinger sy Edouard Hoffmann. Izy io dia iray amin'ireo endritsoratra ampiasaina indrindra amin'ny tontolon'ny famolavolana.
Ho avy: Izy io dia typeface miorina amin'ny endrika geometrika toy ny kianja, faribolana ary telozoro. Izy io dia namboarina taona vitsivitsy talohan'i Helvetica, tamin'ny 1925 tamin'ny Paul renner. Afaka mahita azy amin'ny karazany isan-karazany isika, tsara, semi-black, super black, sns.
MYRIAD: Ny typeface hitako isan'andro rehefa manokatra ny Illustrator-ko amin'ny alàlan'ny default. Nataon'i Robert Slimbach sy Carol Twombly ho an'ny Adobe Systems tamin'ny taona 90. Hatramin'ny namolavolana azy, maro ny famoahana azy natao, satria hitantsika izao ny kinova Myriad Web, namboarina ho azo zahana amin'ny efijery.
Mitondra: Typography noforonina tamin'ny taona 1989 nataon'i Carol twombly, mpiara-mpamorona ny Myriad. Ity typeface ity dia aingam-panahy avy amin'ireo soratra izay misy ny fototry ny tsanganana Trajan, izay avy ihany koa ny anarany. Izy io dia endri-tsoratra izay heveriko fa manana ny toetrany sy ny toetrany.
Ny marina dia manana endritsoratra marobe isan-karazany hampiasaina isika amin'izao fotoana izao, na dia ekeko aza fa rehefa tiako ny endri-tsoratra dia matetika no ampiasako azy. Ary ianao, inona ny typeface ampiasainao aorinao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Endritsoratra 4 be mpampiasa indrindra
Microsoft dia manolotra ny Surface Neo, takelaka misy takelaka roa izay toa tsara
Tonga ao amin'ny Adobe Character Animator ny Keyframes